Beejka Koobad - Telling the Real Story
Sheekadi Ali Baashi
Wuxu ku jiray gacmaha tahriibiyayaashe
Kulunka Qurba-joogta Soomaaliyeed
Xaqiiqada Tahriibka waxay la kulmeen qurbo-jooga Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Stockholm, Sweden bishii November 2019. Qurba-joogta Soomaaliyeed waxay sii wadaan inay door weyn ka ciyaaraan go'aan qaadashada waxayna u dhaqmaan hagida iyo hagida muhaajiriinta badan iyo qaxootiga.
Kartoonka wuxu ku saabsan wiil dhalinyaro ah oo Soomaali ah, Saciid, oo ku riyoonayay inuu aado Yurub. Wuxuu rabay inuu halkaas ka sii shaqeeyo sidii ganacsade ah oo uu dib ugu laabto dalkiisa isagoo ka caawinaya waddankiisa. Qaar badan oo ka mid ah asxaabtiisa waxay u safreen Yurub waxayna u sheegeen sida nolosha cajiibka ahi ay ujirto.
Ifrah Ahmed oo loo magacaabay UNHCR High Profile Supporter
Wargayska TRS - Edition 1
Arag dhammaan waxa cusub
Tageeraha Soo Bandhigida Xaqiiqada Tahriibka, Aar Maanta, ayaa safar 3 asbuuc ah la qaybsaday qaxootida Jijiga. Waxaa u suurto gashay in 3 heesood oo Tahriibka ku saabsan ay soo saaraan.
Tani waa dokumeenti gaaban iyo heestihii la soo saaray waqtigii Aar Maanta Jijiga ku sugnaa.
Tweets ooh qoro Soo Bandhigida Xaqiiqada Tahribka